Yeyiphi & apos; s i-gp-frequency gps kwaye ngaba ifowuni yam inayo? Uvavanyo lokuchaneka kwi-oneplus 7 pro vs s10 +
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Yeyiphi i-apos; s GPS-frequency kwaye ngaba ifowuni yam inayo? Uvavanyo lokuchaneka kwi-OnePlus 7 Pro vs S10 +
Yeyiphi i-apos; s GPS-frequency kwaye ngaba ifowuni yam inayo? Uvavanyo lokuchaneka kwi-OnePlus 7 Pro vs S10 +
Ixesha elitsha liqale ngokurhubuluza kuluhlu lweefowuni zabavelisi, zenza indlela yokubuyela umva ngeXiaomi Mi 8 kodwa ingekasasazeki njengoko nathi & apos sithanda. UXiaomi wade waphuma nevidiyo oyibona ngasentla ukuze aqhayise malunga nokulunga kwayo.
Inqaku liphawulwe kwiphepha le-specs njenge-dual-frequency GNSS (Global Navigation Satellite Systems), ihlala ine-'L1 + L5 'eposwe emva kwayo, njengoko la ngamaqela amabini e-US Global Positioning System (GPS) esebenza kuwo .
Ithetha nje ukuba endaweni yokufumana isiginali evela kwisathelayithi ethile kwisantya esinye, i-chip ngaphakathi kwifowuni ekuthethwa ngayo inakho ukuyenza ngababini. Nazi izibonelelo ezichongiweyo:
Ukukhiya ngokukhawuleza kwesathelayithi
Ukuhamba rhoqo kusetyenziselwa ukutshixa isathelayithi, enye ukubeka indawo
Ukuchaneka ngakumbi, ukubekwa kwinqanaba lendlela
Umahluko phakathi kokwazi ukuba uqhuba ngayiphi indlela, kwaye yeyiphi indlela kuloo ndlela, okanye 1ft (30cm) vs 16ft (5m) ukuchaneka
Umhlaba ongcono wesixeko kunye nokubekwa ngaphakathi
Izikripthi zaseNew York zidume ngokubangela ukubonakaliswa komqondiso kunye neempazamo ezininzi ezinokuthi zinciphiswe ngokuma kabini kwe-GPS ekubekeni indawo
Ngaba ifowuni yam ye-Android ine-GPS ephindwe kabini?
Ngelixa uninzi lweefowuni luqale ukubeka i-chip ye-Broadcom BCM47755 exhasa eli nqaku, kwaye iQualcomm iyidwelise kwi-Snapdragon 855 & apos; s chipset virtues, ayisiyiyo inketho evulekileyo nakwiifowuni ezinezixhobo eziyimfuneko. Ungajonga njani? Kulula, nje khuphela i-GPSTest ukusuka kwiVenkile yokuDlala kwaye ukuba ubona i-L5 okanye i-E5a kwikholamu ye-CF (frequency frequency), uyigolide.
Iichips ze-GNSS ezimbini ezifana ne-Broadcom 47755 inokutshixa imiqondiso emibini kwisathelayithi enye
Insiza inokulandelela amaqela amakhulu e-GNSS: i-GPS (echazwe yiflegi yaseMelika), uGalileo (iflegi ye-EU), i-GLONASS (iflegi yaseRussia) kunye neBeidou (iflegi yaseTshayina). Ikwabonisa iinkqubo zonyuselo olusekwe kwisatellite (SBAS), kubandakanya i-QZSS (iflegi yaseJapan), iGAGAN (iflegi yaseIndiya), iflegi ye-ANIK F1 (iflegi yaseCanada), i-Galaxy 15 (iflegi yaseMelika), i-Inmarsat 3-F2 kunye ne-4-F3 ( Iflegi yase-UK), i-SES-5 (iflegi yaseLuxembourg), kunye ne-Astra 5B (iflegi yaseLuxembourg).
Qaphela i-L5 kunye ne-E5a yokutshixa kumqolo ophezulu? Ezi zimbini-i-OnePlus 7 Pro, i-P30 Pro, i-Oppo Reno 10x, i-Honor 20 Pro, ilandelwa yi-single-frequency Galaxy S10 +, LG G8, iPhone XR kunye nePixel 3 ezantsi
Njengoko ubona apha ngasentla, iifowuni ngaphezulu- i-OnePlus 7 Pro, i-P30 Pro, i-Oppo Reno 10x Zoom, kunye ne-Honor 20 Pro, zine-frequency-frequency enikwe amandla, ngelixa ezantsi-iGPS S10 +, LG G8, kunye nePixel 3, suku. Igama likaMama & apos; sikwimeko ye-iPhone & apos, nangona kunjalo, njengoko kungekho app ingqinelanayo ye-iOS.
I-European Union ayinako ukuvala malunga nenkqubo yayo kaGalileo, ukuya kubude obukhulu ukuphakamisa ubuhle bayo ngeeproses ezimnandi ezinjengevidiyo engezantsi. Ngokwe- umyili we-GPSTest app uGqirha Barbeau , nangona kunjalo, e-US azizukubakho iisathelayithi zase-Europe ezidwelisiweyo, nokuba i-chipset iyayixhasa imixokelelwane ye-GNSS emininzi kwaye inokuthatha imiqondiso yaseGalileo, njenge-855.
'Kungenxa yokuba iKhomishini yoNxibelelwano yase-US (i-FCC) kufuneka iqale yamkele uGalileo ngaphambi kokuba nasiphi na isixhobo sisebenzise imiqondiso yayo kumhlaba wase-US, utshilo u- I-Arhente yeNkqubo yokuSebenzisa iSatellite yeYurophu .
Ngaba isebenza ngcono? S10 + vs 7 Pro vs iPhone XR uvavanyo lokuchaneka kweGPS
Impendulo yile, ixhomekeke kwi-chipset. Ngelixa ezinye zeefowuni ezine-Snapdragon 855 zilapha zinamakhono amabini aphindaphindiweyo e-GNSS enikwe amandla-i-OnePlus 7 Pro kunye ne-Oppo Reno 10x- abayibonisi ngokuchaneka kunokuba, yithi, i-Pixel 3 ene-Snapdragon 845, okanye i-LG G8 nge-Snapdragon 855 uqobo.
Into enomdla kukuba, zonke iifowuni esinazo eofisini ezibonisa ukuphindaphinda kabini njengakwenziwe amandla, ziimpawu zaseTshayina, kubandakanya i-OnePlus 7 Pro, nangona iphethe i-chipset ye-Snapdragon 855. I-7 Pro yethu yimodeli evunyiweyo yokuthengisa eYurophu, nangona kunjalo, inkqubo yoqwalaselo yeCCC inokudlala apha nayo.
Inkqubo ye- Uhlelo lokusebenza lovavanyo lweGPS Into esiyisebenzisileyo ayinakulungiselelwa ukuba isebenzise obu buchule kwaye ikwazile ukubonisa ukuba ezinye izixhobo ezinamaza amabini, ezinje ngeeHuawei kunye neeapos s Kirin 980 chipset, ziyakwazi ukulandela phantse zonke iisathelayithi abazibonileyo. imeko yangaphakathi. Bakwabonisa ukuchaneka okuphezulu kweenyawo ze-13-yesibini kwindawo ephezulu ye-P30 Pro, kunye neyesine i-Honor 20 Pro.
Elandelayo yeyesithathu phezulu - i-Oppo Reno ene-Snapdragon 855, ngelixa enye intshatsheli ephindaphindwe kabini ene-chipset efanayo-i-OnePlus 7 Pro-ayibonisanga ziphumo zingcono kunokuba, yithi, i-LG G8 yesibini kwindawo kumqolo ongezantsi. I-chipset ye-Exynos kwi-S10 + ibonakalise ukuchaneka okungakumbi ngaphakathi, ngelixa i-iPhone XR kunye neapos; Ukuchaneka ngokuthe nkqo kwakuhambelana neReno.
Umqolo ophezulu ukusuka ekhohlo-kabini-kabini i-OnePlus 7 Pro, i-P30 Pro, i-Oppo Reno 10x, i-Honor 20 Pro, ilandelwa yi-S10 + enye, LG G8, iPhone XR kunye nePixel 3 kumqolo ongezantsi
Sibonisa kuphela uvavanyo lwangaphakathi, njengoko ngaphandle kwazo zonke iifowuni zisebenza kakuhle ngokuchaneka kwendawo efanayo phantsi kwesibhakabhaka esicacileyo. Oko kuboniswa yiprobeing yokuma ngaphakathi ngaphakathi, nangona kungachanekanga, kukuba ezinye iihardware ezinendawo ephindaphindwe kabini zinokusebenza bhetele ngophawu olubuthathaka kunye nokuphazamiseka kwizakhiwo.
Oko kukuthi kwindawo yasezidolophini, ezinje ngeeManhattan & apos; s skyscrapers, kwaye kuko konke esinokukucela. Ngoku khawulezisa kwaye ukhuphe inyoka eneentloko ezimbini kuzo zonke iifowuni esele zikho!
Iipilisi zohlahlo-lwabiwo mali ezilungileyo zika-2016
Imicimbi yomlilo yangoLwesihlanu omnyama
Owona mdlalo uya kukwenza ube nomsindo: Ukuwugqitha ngoku kuyafumaneka nge-iOS
I-Fitbit Ionic vs Apple Watch vs Samsung Gear S3: amanqaku kunye nokuthelekiswa kwe-specs
I-S7 enganyangekiyo namanzi kunye ne-S7 edge ibonisa inzwa yokufuma kwindawo ye-USB
I-Apple iPhone 7 vs iPhone 6s vs iPhone 6: iindlela ezintathu zokuthelekisa